Maalin kadib markii badhasaabyada xaafadaha magaalada Sioux City ay codsadeen in daah furnaan dheeri | KWIT
Madaxweyne Donald Trump wuxuu saxeexayaa amar fulineed oo ah inuu isku dayo oo joojiyo hilib yaraanta sababta oo ah coronavirus.
Amarkan wuxuu u adeegsan doonaa Sharciga Waxsoosaarka Difaaca inuu ku kala saaro ka shaqeynta hilibka inuu yahay warshado muhiim u ah si loo hubiyo in dhirta wax soo saarka ay furnaato.
Si kastaba ha noqotee, Ururka Shaqaalaha Cuntada iyo Ganacsiga ee United wuxuu leeyahay Tyson iyo dhammaan dhir hilibka cuna waa inay si deg deg ah wax u qabtaan si ay u ilaaliyaan shaqaalaha Mareykanka iyo cunnada.
Iowa iyo Nebraska waxay uga digayaan shaqaalaha inay waayi doonaan faa iidooyinkooda shaqo la'aanta haddii ay diidaan inay soo laabtaan markii loo shaqeeyuhu dib ugu yeero.
Iowa wuxuu u wareegayaa qeyb ahaan dib u furayaa 77 ka mid ah 99 degmo ee gobolka Jimcihii. Nebraska ayaa furaya ganacsiyada qaybo ka mid ah gobolka Isniinta.
Dib u furista ayaa imaaneysa iyadoo Iowa ay la kulantay mid ka mid ah heerarka ugu dhaqsaha badan ee kobcinta xaaladaha kiisaska cudurka coronavirus. Waxaa jiray sagaal dhimasho oo dheeri ah oo la soo sheegey Talaadadii iyo 600 oo xaaladood oo dheeri ah. Inka badan 20% kiisaska cusub waxay ka yimaadeen Gobolka Woodbury.